Amerika Iberika: Fihaonan-toby oniversitera ao El Salvador · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2019 4:08 GMT
Tamin'ity herinandro ity tany Salvadaoro, mpankafy teknolojia an-jatony no nivory tao an-drenivohitra San Salvador mba handray anjara amin'ny fizarana farany amin'ny Campus Party [Lanonan-toby oniversitera]. Manangona ireo mpandray anjara “miaraka amin'ny solosain'izy ireo ny hetsika, ny tanjona dia ny hifampizara ny ahiahin'izy ireo, hifanakalo traikefa ary handray anjara amin'ireo karazana hetsika rehetra mifandraika amin'ny fifandraisana sy ny teknolojia vaovao.” Ny fototra maha-olombelona no ivon'ny Lanonan-toby oniversitera. ” Ny hetsika farany indrindra dia natao tao Kolombia, Brezila ary Espaina, ary sambany tany Amerika Afovoany, notontosaina niaraka tamin'ny Fihaonambe Amerikana Iberika faha-XVIII ny Campus Party Ibero-América [Lanonan-toby oniversitera Amerika Iberika] izay nahitana fandraisana anjaran'ireo filoham-panjakana.
Nizara ho any amin'ny sehatra maro: toy ny Astronomia, ny CampusBot (robotika), ny Zava-baovao (Innovation), ny Modding (Famolavolana), ny Campus Create, ny Fialam-boly Nomerika ary ny Fampiatiana Nomerika ireo mpandray anjara avy any El Salvador sy ireo mpikambana ao amin'ny Firenena 22, ary nahitana ny fandraisana anjaran'ny bilaogera. Naka ny fahatsapana amin'ny maha-tao amin'ny efitra miaraka amin'ireo namany hafa mpankafy teknolojia tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra bilaogy, sary ary lahatsary ireo bilaogera ireo.
Sary avy amin'i Patinet ary nampiasaina tamin'ny lisansa Creative Commons.
David avy ao amin'ny bilaogy Dark Manfred [es] sy teratany ao El Salvador nanoratra momba ny fahatsapany voalohany momba ny habetsaky ny ordinatera tao amin'ny efitrano, izay efa an-jatony.
Miaraka amin'ireo solotenan'ny firenena ibero-amerikana 22, fahafahana mihaona amin'ny hafa mizara hevitra, ary mahita izay ataon'ny hafa manerana ny faritra ity hetsika ity. Blogchorno [es] avy any El Salvador nanana fahafahana nahita ordinatera XO avy amin'ny tetikasa One Laptop Per Child izay nentin'ireo mpandray anjara avy any Orogoay. Voasolo tena ihany koa ny haino aman-jery nentim-paharazana, tahaka ny La Prensa Grafica, iray amin'ireo gazety lehibe indrindra ao San Salvador izay nanokana bilaogy [es] hitantarana ny hetsika ary namoaka fanamarihana momba ny hetsika Blogs & Beers ho an'ireo bilaogera eo an-toerana sy ireo bilaogera mpitsidika. Mampirobrobo ny hetsika ao amin'ny Facebook ihany koa i David Mejia .
Bilaogera maro no manoratra momba ny sehatra nankafizin'izy ireo indrindra tao amin'ny Campus Party, tena talanjona i Rafael Monge tamin'ny famolavolana (fanovàna) ny solosaina avy amin'ny boitiers tamin'ny orinasa niaviny miaraka amin'ny “endrika manokana namboarin'ireo tompony mba hahatonga ireo zavatra tena hahavariana : fitaovana namboarina manokana izay mihoatra noho ny asakanto.”
Nahasarika ny maro ihany koa ny roboto, amin'ny endrika orizinaly namboarin'ireo solontena manerana an'i Ibero-América. Naka lahatsary misy ilay roboto mitsangan-drery i Joster Ricardo
Satria maro amin'ireo mpandray anjara no mpankafy ny Rindrambaiko tovozina malalaka (Open and Free Software), dia maro ireo nientanentana tamin'ny famoahana ny endrika vaovao farany tamin'ny Ubuntu 8.10. Mba hampielezana ny teny, dia ahitana ny marika eny rehetra eny, tahaka ny vatan'ny solosaina sy ny marika eo amin'ny lamosin'ny olona mba hahafantaran'ny tsirairay ny tanjona amin'ny fizarana izany. Manana sary i Edwin ao amin'ny Sansivar Graphics [es].
Na dia izany aza, tsy ny bilaogera rehetra no tonga avy any El Salvador, ny hafa niainga avy lavitra be toa an'i Gustavo Reyes ao Guatemala [es], Hugo Miranda avy ao Bolivia [es], Carolina Botero avy any Kolombia [es], ary Julio Juan Ortega avy ao Nikaragoà [es]. Fotoana nahafahan'ireo mpitsidika voalohany tany El Salvador nanandrana ny nahandro eo an-toerana ihany koa ny fivoriana. Joan Guerrero avy any amin'ny Repoblika Dominikanina [es] naka sary ny fivoahana tamin'ny fanandramana ny pupusas nentim-paharazana.
Mitohy mandritra ny Asabotsy maraina ny hetsika, ary afaka manaraka ny ambin'ny fandaharam-potoana ao amin'ny pejy ofisialy YouTube, Twitter, Flickr, sy Facebook-n'ny Campus Party ny tsirairay.
Goatemalà 1 andro izay
Meksika 5 andro izay